NISA oo sheegtay in ay Muqdisho ku qabatay Xubin ka tirsan Alshabaab - Ceelhuur Online
Home > Wararka Maanta > NISA oo sheegtay in ay Muqdisho ku qabatay Xubin ka tirsan Alshabaab
September 3, 2018 admin203
Ciidamada Amniga oo howlgal qorsheysan ka fuliyay Magaalada Muqdisho ayaa gacanta ku soo dhigay Xubin ka tirsan Alshabaab oo maleegayay Qaraxyo lagu waxyeeleynayo shacabka, sida uu sheegay Taliska NISA.
Warkan ka soo baxay Taliska Hay’adda Sirdoonka iyo Nabad-sugidda Qaranka ee NISA ayaa lagu sheegay in howlgalkan oo dhacay 2dii September ee Maantii shalay oo ku beegneyd Qaraxii Al-Sabaab ku gumaadeen dad shacab ah.
Howlgal ciidanka nabadgalyadu ka fuliyay Muqdisho 2da Sabtembar 2018, ayaa lagu qabtay xubin AS ah oo maleegayay qaraxyo. Subaxii hore ee maalinkaa ayay AS ku gumaadeen shacab qarax ay la beegsadeen degmada Howl-wadaag.Nagu garab istaag ka hortaga AS si dadkeenu u gaaro nabad.
— NISA (@HSNQ_NISA) September 3, 2018
“Howlgal ciidanka nabadgalyadu ka fuliyay Muqdisho 2da Sabtembar 2018, ayaa lagu qabtay xubin Al-Shabaab ah oo maleegayay qaraxyo. Subaxii hore ee maalinkaa ayay Al-Shabaab ku gumaadeen shacab qarax ay la beegsadeen degmada Howl-wadaag.Nagu garab istaag ka hortaga Al-Shabaab si dadkeenu u gaaro nabad”. ayaa lagu yiri war qoraal ah oo la soo dhigay Barta Twitterka ee Hay’adda NISA.
Magaalada Muqdisho iyo qaar kamid ah Gobolada Dalka waxaa ka socda Howlgalo ay wadaan Ciidamada Amniga,iyagoo ku guuleystay inay ka hortagaan dhibaatooyin badan oo Argagixisada ay la maaganaayeen shacabka Soomaaliyeed
Madaxweyne Farmaajo oo la Kulmay Abiy Axmed
Magacyada 4 nin oo Alshabaab ku toogteen degmada Jamaame